गर्भवती भएको बेला के तपाईंलाई फ्लू आयो भने के गर्ने - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा भारी खेल औषधि जानकारी समुदाय समाचार, कल्याण कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समुदाय, कम्पनी मनोरञ्जन कम्पनी प्रेस स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समुदाय, कल्याण चेकआउट समाचार
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> गर्भवती भएको बेला के तपाईंलाई फ्लू आयो भने के गर्ने
गर्भवती भएको बेला के तपाईंलाई फ्लू आयो भने के गर्ने
स्वास्थ्य शिक्षा मातृ मामिलाहरु
जब तपाईं अपेक्षा गर्दै हुनुहुन्छ, एक स्वस्थ बच्चा तपाईंको प्राथमिकता हुन् - र यसको मतलब तपाईंको आफ्नै स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु हो, विशेष गरी चिसो र फ्लूको मौसममा। गर्भावस्थाले स्वाभाविक रूपले तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई दबाउँछ, यसको मतलब तपाईं सजिलै सजीलो सामान्य रोगहरू समात्नुहुन्छ। जे होस् फ्लू एकदम सामान्य छ, बच्चा लिने बेलामा यो खतरनाक हुन सक्छ। भाग्यवस, आफैंलाई बचाउनका लागि तरिकाहरु छन्। र, यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ कि तपाइँ उजागर हुनुभयो भने, तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाइँ मार्फत मार्गदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कसरी छ।
तपाइँ काउन्टर मा pantoprazole किन्न सक्नुहुन्छ
कसरी गर्भावस्था को समयमा फ्लू रोक्न
गर्भवती भएको बेला फ्लूबाट बच्नको लागि सबैभन्दा उत्तम र उत्तम तरीका: इन्फ्लुएन्जा खोप लिनुहोस्। यो पूर्ण रूपमा छ गर्भवती आमाहरूका लागि सुरक्षित — मौसमी फ्लू शट अनुरोध गर्न निश्चित गर्नुहोस्, नाक स्प्रे प्रतिरक्षण होइन। वास्तवमा, रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रहरू (CDC) सिफारिश गर्दछ सबै गर्भवती महिला खोप (र एक साझा अध्ययन सूची यसले सुरक्षा र प्रभावकारिता देखाउँदछ यदि तपाईं चिन्तित हुनुहुन्छ भने)।
थपिएको बोनस? तपाइँको बच्चा सुरक्षाको साथ ती कमजोर सुरुका महिनाहरूमा जन्मिनेछ। बोर्डमा प्रमाणित बाल रोग विशेषज्ञ, मेडिकल निर्देशक जेसिका म्याडेन, एमडी बताउँछिन्, फ्लु खोप लगाएपछि उत्पादित मातृ फ्लु एन्टिबडीहरू बच्चालाई सुरक्षा प्रदान गर्न प्लेसेन्टा पार गर्दछन्। एयरफ्लो ब्रेस्टपम्प्स । त्यसकारण, नवजात शिशुलाई फ्लू लाग्नबाट जोगाउन मातृ फ्लु खोप उत्तम उपाय हो।
त्यसो भए, COVID-19 लाई नियमित धन्यवाद भएको तीन सरल सरसफाइ नियमहरूको अभ्यास गर्न नबिर्सनुहोस्:
उचित अभ्यास गर्नुहोस् हात धुने
आफ्नो अनुहार छुने बेवास्ता गर्नुहोस्
बिरामी मानिसहरूसँग घनिष्ठ सम्पर्क न्यूनतम पार्नुहोस्
याद गर्नुहोस्, संक्रमित मानिसहरूलाई लक्षणहरू देखाउन केही दिन लिन्छ, त्यसैले सावधान हुनुहोस्। यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ र र तपाईंको परिवारमा कसैलाई फ्लू छ भने, आफैलाई बचाउन अतिरिक्त कदमहरू चाल्नुहोस्। सीडीसीका अनुसार संक्रमित भए पछि पहिलो धेरै दिन संक्रापका लागि सबैभन्दा खराब हो (अरूमा यसले फैलाउँदछ)। बिरामी व्यक्तिबाट तपाईंको दूरी राख्नुहोस्, मास्क लगाउनुहोस् जब तपाईं समान कोठामा हुनु आवश्यक हुन्छ, सतहहरू खाली गर्नुहोस्, र साझा वस्तुहरू प्रयोगबाट टाढा रहनुहोस्। जब श in्का लाग्छ, आफ्नो हात धुनुहोस्।
गर्भवती भएको बेला मलाई फ्लू आयो भने के हुन्छ?
यदि तपाईंलाई गर्भवती भएको बेला फ्लू लागेको हुनसक्छ भन्ने लाग्छ भने, जतिसक्दो चाँडो तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई कल गर्नुहोस्। सीडीसीका अनुसार गर्भवती आमाहरूमा प्रारम्भिक पहिचान र फ्लूको राम्रो परिणामसँग सम्बन्धित छ।
तपाईको शरीर पहिल्यै कडा मेहनत गरीरहेको छ मानव विकास र हेरचाह गर्न। इन्फ्लूएन्जा जस्ता संक्रमणले तपाईको प्रणालीमा थप तनाव थप्यो - तपाईलाई गम्भीर फ्लू जटिलताको लागि बढी जोखिममा राख्ने जस्तै धेरै कम र अन्य दुय्यम संक्रमणहरूमा फिभर, एमडी स्नेहल दोशी भन्छन् मिलेनियम नियोनाटोलजी ।
यस अनुसार अमेरिकी गर्भावस्था एसोसिएशन गर्भावस्थामा फ्लूको लक्षणमा समावेश छन्:
सास / खोकी
पखाला वा बान्ता
अचानक चिसो वा ज्वरो
सम्बन्धित: COVID-१ vs बनाम फ्लू र एक चिसो
यदि तपाईं यी मध्ये कुनै पनि अनुभव गर्नुहुन्छ फ्लू लक्षण , तिनीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस्। तपाइँको प्राथमिक हेरचाह चिकित्सक र तपाइँको प्रसूति चिकित्सक बताउनुहोस्। डा। म्याडेन भन्छिन्, गर्भवती महिलाहरूलाई निमोनियालगायत इन्फ्लूएन्जा भाइरसको गम्भीर जटिलता हुने खतरा हुन्छ।
वार्षिक कटौती योग्य बनाम पकेट बाहिर अधिकतम
तपाईंको विकास भइरहेको बच्चालाई पनि त्यहाँ खास जोखिमहरू छन्। डा। म्याडेनले गर्भावस्था जटिलताहरूको चेतावनी दिन्छ जसमा गर्भपात र समयपूर्वता समावेश छ ... साथै फ्लूसँग सम्बन्धित फेभर्सले बच्चालाई स्नाइन बिफिडा जस्ता स्नायु ट्यूब दोषहरू विकास गर्न सक्ने चिन्ता गर्दछ।
यदि तपाईंसँग छ भने गम्भीर डिहाईड्रेशन, उच्च ज्वरो, वा सास फेर्न कठिनाई जस्ता फ्लु लक्षणहरू, तपाई अस्पताल जानु पर्दछ वा तुरुन्तै आपतकालिन हेरचाह गर्नुपर्छ। यो विशेष गरी ती केसहरूमा सत्य हुन्छ जहाँ आमाको पहिल्यै अवस्थित अवस्थाहरू हुन्छन् जसले फ्लूको जटिलता बढी सम्भावना गर्दछ, जस्तै मधुमेह (गर्भवती मधुमेह सहित) वा दम। गर्भावस्थामा उत्पन्न हुने प्रायः मुद्दाहरूको साथमा, यो क्षमाको लागि सुरक्षित रहनु राम्रो हो!
गर्भवती भएको बेला म फ्लूको लागि के लिन सक्छु?
कुनै पनि उपचार सुरु गर्नु अघि जहिले पनि तपाईंको हेल्थकेयर प्रदायकसँग परामर्श गर्नुहोस्। यहाँ सम्म कि काउन्टर औषधीहरू। तपाईंको चिकित्सकले तपाईंलाई कुन र कुन विधिहरू तपाईं र तपाईंको गर्भमा रहेको बच्चाको लागि सबैभन्दा सुरक्षित छ भनेर पत्ता लगाउन मद्दत गर्दछ।
यदि तपाईंले आफ्नो पहिलो लक्षणको hours 48 घण्टा भित्र फ्लू भएको महसुस गर्नुभयो भने, उत्तम उपचार एक एंटीवायरल औषधि हो जसले तपाईंको रोगको गम्भीरता र लम्बाइ कम गर्न सक्छ। तामीफ्लु (oseltamivir) वा रेलेन्जा (zanamivir) गर्भवती महिलाहरूको लागि सुरक्षित मानिन्छ, को अनुसार यु एस खाद्य र औषधि प्रशासन । मौखिक oseltamivir सिफारिश गरिएको छ किनभने यसमा अधिक फाइदा छ यसलाई लाभदायक देखाउनको लागि, CDC अनुसार।
अधिकांश चिकित्सकहरूले विचार गर्छन् Tylenol (एसिटामिनोफेन) गर्भावस्थामा लिन सुरक्षित ज्वरोलाई कम गर्न वा शरीर दुखाइ कम गर्न। पेयर गर्नुहोस् कि धेरै आराम, प्रशस्त तरल पदार्थ, र प्राकृतिक उपचारहरूको साथ।
गर्भावस्था को लागी फ्लु उपचार
यदि तपाईं फ्लू छ भने, तपाईं के गर्न चाहनुहुन्छ एक Nyquil पप र एक लामो रात निद्रा को लागी जानु छ। गर्भावस्थामा, धेरै जसो संयोजन औषधिहरू अफ-सीमाहरू हुन्। हृदय लिनुहोस् — त्यहाँ केही घरेलु उपचारहरू छन् जसले वास्तविक राहत प्रदान गर्दछ:
तातो स्नान लिनुहोस्, वा चिसो स्टीमरबाट न्यानो, आर्द्र हावा सास फेर्नुहोस्।
तातो नुनको पानीले गार्गल गर्नुहोस् यदि तपाईंलाई घाँटी दुखेको वा खोकी छ भने।
भरिएको नाक र घाँटी दुखाइको लागि मह र निम्बूको साथ तातो चिया पिउनुहोस्।
अनुनासिक भीड र बलगम ढिलो गर्न सालिन कुल्ला प्रयोग गर्नुहोस्।
मांसपेशियों को दुखाइ र साइनस पीडा को लागी न्यानो र चिसो कम्प्रेस लागू गर्नुहोस्।
साथ हाइड्रेट तातो ब्रोथ र नराम्रो खाना खान (टोस्ट जस्तै) यदि तपाईं पेट समस्याहरू छन् भने।
सकेसम्म आराम गर्नुहोस्।
गर्भावस्थाको समयमा फ्लू लिन सक्ने जोखिम हुन्छ, तर तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूसँग उचित सञ्चारले तपाईंलाई सुरक्षित तरिकामा राम्रो महसुस गर्न मद्दत गर्दछ। र यदि तपाईंसँग अझै छैन भने, आफ्नो फ्लू खोप लगाउनुहोस्। त्यसो भए तपाईले यो निश्चित गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईको गर्भावस्था जति सक्दो स्वस्थ र चिन्तामुक्त छ (कम्तिमा जब यो विशेष चिन्ताको विषय आउँदछ!)।
स्तनपान आहार:9खानाहरु बाट बच्न वा सीमित गर्न को लागी
नेक्सप्लानन बनाम मिरेना: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
कहिले सम्म torsemide तपाइँको प्रणाली मा रहन्छ
कसरी एक राती छिटो घाँटी दुख्ने प्राप्त गर्न
कसरी diflucan शरीर मा काम गर्दछ
फ्लू ए र फ्लू बी बीच के फरक छ?
गर्भवती हुँदा वाकवाकी को लागी औषधि लिनुहोस्
के एक सकारात्मक औषधि परीक्षण को कारण हुन सक्छ